विनयजंगको घरमा छा पा ! ‘घिसारेर चौकी लैजान्छु’ भन्दै विनयजंगको घरमा पुग्ने यिनी को हुन् ?(भिडियो हेर्नुस्) - " सुलभ खबर "
काठमाडौ । वेवारिसे शव ब्यवस्थापनमा लागेर बीबीसीमा शक्तिशाली १०० महिलाको लिष्टमा परेकी सपना रोका र उनले बुवा मानेको विनयजंग वस्नेतबीचको विवादका बीच अन्य ब्यक्तिहरुको पनि संलग्नताले अहिले सामाजिक सञ्जाल युट्युवमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
युट्युवमा उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर निकै टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यतिबेला सपना पनि आफु अन्यायमा परेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन गएकी छन् । तर सपनाले प्रहरी प्रशासनले आफुलाई सहयोग नगरेको भन्दै गुनासो गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा कानुनको विश्वास गरेर यतिन्जेल चुप लागेको बसेको र तर आफ्नो सुनुवाई नभएको भन्दै गुनासो गरेकी थिइन् । तर यो विषयमा सबैभन्दा बढी आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने सर्मिला वाइवाले टिप्पणी गरेकी छन् । उनले विभिन्न युट्युव च्यानलमा उनीहरुको सम्बन्ध केहो खुलस्त वाहिर आउनुपर्यो भन्दै आएकी छन् ।
उनी पनि केही समय विनयजंगसंग काम गरेको बताउँछिन् । विनयजंगको संस्थाको सदस्य पनि भएका नाताले अहिले विनयजंगको घरमा पुगेको बताउँछिन् । उनी अहिले अकस्मात विनयजंगको घरमा पुग्दा उनको घरमा ताला लागेको छ । उनले विनयजंगलाई फेला परे घिसारेर भएपनि प्रहरी कार्यालय लैजाने चेतावनी दिएकी छन् । छोरी मानेको सपना माथि अन्याय गरेको भन्दै उनले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले सपना र विनयजंगलाई संगै राखेर कुरा गर्ने प्रयास गरेको भएपनि त्यो सफल हुन नसेकेको बताइन् । उनले सपनाको भिडियो सार्वजनिक गर्ने युट्युवरलाई पनि चेतावनी दिएकी छन् । अनुप लिम्बु नाम लिएर उनले यस्तो चेतावनी दिएकी छन् ।
भर्खरै यादव पहिलो पटक मिडियामा! लाहुरे राहुल र स्मिताको मिलनपछि सन्तोष दाइलाई के भयो यस्तो
लामो समयपछिको भेटमा के के कुरा गरे पारसले पत्नि हिमानीसँग ?
टिकटकमा भिडियो बनाउदा, यी युवतीले भिडियोमै कपडा खोलेपछी ईन्टरनेटमा भाइरल ( भिडियो ) !
कस्ता पुरुषलाई ध्यान दिने गर्छन् महिलाहरू थाहा पाउनुहोस ।